Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Barbados News Breaking » Dalxiiska Barbados wuxuu ku soo laabanayaa diiwaangelintii bishii Luulyo
Airlines • Airport • Wararka Ururada • Aviation • Barbados News Breaking • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • saaciday inay • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • News • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Barbados waxay leedahay, oo sii wadaysaa cimilada duufaankan COVID-19, laakiin in kasta oo muddadan ay ku adkayd warshadaha, BTMI aad bay ugu faraxsan tahay inay aragto biqilkii ugu dambeeyay ee koboc wanaagsan.
10,000 oo rakaab diyaaradeed ah ayaa yimid Barbados.
Warshadaha dalxiiska ee Barbados ayaa diiwaan galiyay dalxiiskii ugu weynaa ee dalxiis bishii July.
Dalxiiska Barbados wuxuu u arkaa isbadal wanaagsan warshadaha kahor 2021/2022 xilliga jiilaalka.
Barbados waxay diiwaangelisay in ka badan 10,000 oo rakaab diyaaradeed ah ka dib bilooyin ay si xun ugu dhufatay masiibada adduunka. Markii ugu horreysay tan iyo Diseembar 2020, warshadaha dalxiiska ee maxalliga ah ayaa diiwaangeliyay horumar dalxiis oo weyn iyadoo tirakoobyadii ugu dambeeyay laga helay Barbados Dalxiiska Suuqgeynta Inc. (BTMI) oo soo jeedinaya in dhinaca wanaagsan loo rogo warshadaha ka hor xilliga jiilaalka 2021/2022.
Intii lagu jiray muddadii Luulyo 2021, qiyaastii 10,819 booqde ayaa u safray Barbados. Wadartani waxay ka dhigan tahay koror aad u weyn oo 6,745 booqdeyaal ah marka la barbar dhigo muddadii u dhiganta Luulyo 2020.
Mareykanka (Mareykanka) ayaa ku soo baxay kaalinta ugu sarreysa markii ay la wareegeen saamiga suuqa 43.3%, halka Boqortooyada Ingiriiska (Boqortooyada Midowday) waxay ku biirisay 34.4% ganacsi iyadoo 3,722 ay timid muddada warbixinta. Tani waxay dhacday kadib markii Barbados lagu daray liiska daawashada cagaaran ee UK COVID-19. Barbados waxay nasiib u yeelatay in lagu daro liiskan markii labaad tan iyo bilowgii masiibada COVID-19.
Isla muddadaas, tirooyinka imaanshaha Kariibiyaanka waxay ahaayeen 1,391 iyo 390 ka yimid Kanada. Tani waxay ka dhigan tahay kororka dadka imanaya labada suuqba sanadba sanadka ka dambeeya.
Maamulaha ku meel gaarka ah ee Suuq-geynta Dalxiiska Barbados Inc. (BTMI) , Craig Hinds, ayaa ku tilmaamay guusha inay tahay tallaabo dhinaca wanaagsan loo qaaday ka dib dadaalkii aan kala joogsiga lahayn, ee goobta iyo dibaddaba, si dib loogu dhiso badeecada dalxiiska.
Wuxuu caddeeyay in “Barbados ay leedahay, oo sii waddo cimilada duufaankan COVID-19, laakiin in kasta oo muddadan ay ku adkayd warshadaha, BTMI aad bay ugu faraxsan tahay inay aragto soo bixitaankii ugu dambeeyay ee kobaca wanaagsan. Kobacaani waa natiijada tooska ah ee dadaallada iibka iyo suuqgeynta ee suuqyadeena dibedda iyada oo loo marayo ololeyaal sida “Kaydinta Xagaaga Macaan”, iyo sidoo kale ilaalinta iskaashiyo xooggan oo lala yeesho shirkaddayada duulimaadyada, doonyaha iyo dalxiiska. ”
Bishii Luulyo, BTMI waxay la midowday Dalxiis Sandals maadaama ay keeneen shan iyo toban idaacadood oo Mareykan ah oo ka yimid kow iyo toban magaalo Barbados si dhegeystayaasha fursad loogu siiyo inay ku guuleystaan ​​fasax afar maalmood/saddex habeen ah Sandals Resort ee Barbados. Idaacadaha ayaa si toos ah u tabinayey Sandals Royal Barbados waxaana ka mid ahaa masuuliyiin dalxiis oo uu hogaaminayay Sen. Hon. Lisa Cummins, Wasiirka Dalxiiska iyo Gaadiidka Caalamiga ah. Dhiirrigelinta, oo ay sidoo kale taageertay American Airlines, ayaa gaartay in ka badan 4,000,000+ dhagaystayaal.
MAMERITO SSENFUMA wuxuu leeyahay,
Ogosto 23, 2021 markay tahay 20:20
Dalxiiska Kooxda Barbados ee si wanaagsan loo qabtay shaqada weyn. iskaashiga, isuduwidda iyo iskaashiga iyo sidoo kale joogtaynta iskaashiyo xooggan oo lala yeesho dhammaan la-hawlgalayaasha dalxiiska ayaa fure u noqon doona dhiirrigelinta goobaha dalxiiska ee safmarka covid-19.